Vaovao - Mandraisa anjara amin'ny fisorohana ny areti-mifindra manerantany
Mandraisa anjara amin'ny fisorohana ny valanaretina manerantany
Voakasiky ny toe-javatra manerantany momba ny valanaretina coronavirus vaovao, ny orinasa dia manomboka manao sarontava fikarohana sy baiko misaron-tava ny vokatra haingana, mba hanao ny ezaka ataontsika manokana ho fisorohana ny valanaretina.
Hatramin'ny faran'ny taona 2019 dia niseho ny valanaretina coronavirus vaovao marobe (antsoina hoe COVID-2019) i Sina, izay nahasarika ny sain'ny governemanta sinoa sy ny vahoaka. Covid-19 dia manondro pnemonia naterak'i Novel Coronavirus 2019, ary ny fisehoany dia ahitana ny tazo, havizanana ary kohaka maina. Tamin'ny 28 Febroary 2020, ny tatitra nataon'ny WHO momba ny COVID-19 isan'andro dia nampiakatra azy io ho "avo indrindra" eo amin'ny sehatry ny risika isam-paritra sy manerantany, mitovy amin'i Shina ihany, io no ambaratonga avo indrindra avy amin'ny "avo" teo aloha.
Tamin'ny 11 martsa 2020 ora teo an-toerana, nanambara ny Tale jeneralin'ny WHO fa, mifototra amin'ny fanombanana, mino ny WHO fa ny areti-mandringana COVID-19 ankehitriny dia azo antsoina hoe areti-mandringana manerantany. Ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety an'ny Center Prang Epidemika ShangHai dia nanamafy: Ny làlan'ny fampitana COVID-19 dia ny fampitana mivantana, ny fifindran'ny aerosol ary ny fampitana fifandraisana. Ny fifindrana mivantana dia manondro ny aretina ateraky ny fifohana sigara, ny kohaka, ny firesahana ary ny rivotra mifoka rivotra akaiky. Ny fifindran'ny aerosol dia manondro ny aretina amin'ny alàlan'ny aerosol suction izay niforona tamina vongan-drano mifangaro ao anaty rivotra. Ny fifindran'ny fifandraisan-davitra dia manondro ny fametrahana ny rano indray mitete eo ambonin'ny zavatra, rehefa avy nifandray tamina tanana voaloto, ary avy eo nifandray tamin'ny molotra, orona sy maso, nanjary aretina. Ka noho ny toe-javatra goavambe dia nandray andiana fepetra mahomby amin'ny fanoherana ny valanaretina ny governemanta China. Saingy mandritra izany fotoana izany dia niparitaka erak'izao tontolo izao haingana ny valan'aretina ary ilaina maika ny fanampiana. Nanjary vonjy taitra eran-tany izany. Teo ambanin'ny toe-draharaha manerantany, Andriamatoa Xiuhai Wu izay filohan'ny orinasa Besttone dia nikarakara fivoriana maika ary nandray fanapahan-kevitra lehibe: manomboka ny fikarohana sy ny famokarana sarontava ary ny fitaovana fisorohana valanaretina faran'izay haingana, mampitombo ny famokarana ny sarontava, ary mametraka azy aza. amin'ny voalohany. Tao anatin'ny telo volana latsaka andro sy alina dia namokatra sarontava maherin'ny 10 tapitrisa ny orinasa Besttone. Izy io dia manao ny fahaizan'ny famokarana avo indrindra.
Masiaka ny valanaretina, saingy mafana ny vahoaka. Noho ny fanompoana an'izao tontolo izao, Besttone 20 taona, dia teny an-dàlana izahay.
Fotoana fandefasana: Nov-11-2020